Plasma Mobile 21.07 inosvika pamwe nekuvandudza mashandiro | Linux Vakapindwa muropa
Ini ndinofunga kuti yeLinux Mobiles uye mapiritsi ave sarudzo chaiyo, imwe nguva ichiri kuzopfuura. Chinenge zvese zvirimo mubeta uye hazvigone kushandiswa kwezuva nezuva kushandiswa, asi izvo zvinogona kuchinja gare gare gore rino nekuuya kwe jing pad. Hwendefa ravari kugadzirira kuChina rine kubatana kwevamwe vanogadzira KDE, uye ndezvekuti iyo software yeK inoita kunge ndiyo ichatungamira muLinux Mobile yenyika. Nechikonzero ichocho, ndinofunga zvakakosha kutaura nezve kuvhurwa kwakaitika masikati ano: Plasma Nhare 21.07 Ikozvino yave kuwanikwa.
Nezuva rega rega rinopfuura, KDE / Plasma iri kusvika kune akawanda uye akawanda majaira. Mushure mezvataurwa pamusoro JingPad, Valve ichangoburitsa yayo Steam dhizaini, Nyaradzo Laptop inofambiswa neshanduro nyowani yeSteamOS iyo yakavakirwa paArch Linux uye KDE. PINE64 zvakare yakasarudza Plasma seyunongedzo yefoni yako nhare, kunyanya iyo inopihwa naManjaro, uye postmarketOS iyo zvakare inovimba ne KDE yeayo inoshanda system.
Zvinoratidza zvePlasma Mobile 21.07
Kusiyana neiyo vhezheni yedesktop, iyo yakagadzirirwa mamoiles haitarise zvakanyanya pamifananidzo yakajeka sekushandisa. Pakati pezvinhu zvitsva izvo zvaisanganisira muPlasma Mobile 21.07, isu tine:
Iyo Shell inoteerera uye mashandiro epaneru yepamusoro akagadziridzwa.
Yakagadzirisa nyaya ine nhamba dzekunze pane iyo Dialer. Vakagadzirisa zvakare bhagidhi inogona kukonzeresa kuti dialer iratidze zita risiri rekutaurirana kana ichitambira foni.
Iko kunyorera kweSMS kwakagadziridzwa, uye ikozvino inoshuma nemazvo kana paine chero zvikanganiso uye inoratidza iyo nhamba kwavanotumirwa. Zvakare, machats ikozvino akarongedzwa nenzira kwayo.
KWheather akagadzirisa nyaya dzinoverengeka uye akagamuchira zvigadzirwa zvekuzora.
KClock yakagamuchirawo kugadzirisa, pakati payo pane aesthetics, senge KRecorder.
Qrca ikozvino inokutendera iwe kusarudza pakati akati wandei aripo makamera kuverenga mabharodhi. Inopawo kugona kuendesa pachena matiketi emakodhi muiyo KDE Mafambiro, uye inopa zvinobatsira zvinongedzo zvemakodhi ane epasi rese chinhu nhamba kana ma ISBN. Sezvo mune mamwe maapplication, ivo vakavandudza mushandisi interface.
Zvakawanda zvakagadziriswa kuiyo Kasts app, iyo podcast app.
Plasma Mobile 21.07 inowanikwa kubva masikati ano, saka inofanira kukurumidza kuoneka pane mamwe madhizaina sePinePhone Beta.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Plasma Mobile 21.07 inosvika iine zvirinani kuita, kugadzirisa muepodcasts app uye kumwe kugadzirisa